Julian Assange anopinda muhondo yekurwisa kuendeswa kuUnited States | Linux Vakapindwa muropa
Pakunzwa muLondon nezuro, Mutongi Michael Snow akaudza Julian Assange kuti aigona kubvuma kudzoserwa kuUnited States, apo vatsigiri vake vakaungana mukati nekunze kweUnited States. Dare redzimhosva, kuimba nekubata zvikwangwani zvaida rusununguko.
Julian Assange akavimbisa kurwa uye asingaregi kupokana nekudzoserwa kuUnited States uye kuti izvi zvinogona kukonzera kupesana mune inogona kuve yakareba uye yakaoma kurwa kwemutemo.
«Ini handidi kuburitswa nekuda kwekutapa nhau iyo yakahwina mibairo yakawanda uye yakadzivirira vanhu vazhinji", Julian Assange akaudza dare kuburikidza nehupenyu vhidhiyo kubva muchitokisi chejeri kwaari, maererano neMedia.
Sezvacherechedzwa pano pa blog, iyo WikiLeaks muvambi «Julian Assange »akasungwa muna Kubvumbi nemapurisa eLondon Metropolitan akatora kusungwa kwake kumuzinda nekutakura kwake kuenda kunzvimbo yake yazvino yehusungwa.
Nekudaro akavhura nguva nyowani yehondo dzepamutemo dzehunhu hunopokana.
1 United States ichaita zvese zvinobvira pakuwedzeredzwa
1.1 Pfungwa dzevanyanzvi vezvemitemo pamamiriro anofanirwa kuzadzikiswa
United States ichaita zvese zvinobvira pakuwedzeredzwa
Sekutevera, hurumende yeUnited States yakapa gweta kupokana nemuvambi weWikiLeaks. Mune zvakaburitswa neDhipatimendi reJustice reU.S. "chimwe chezvikanganiso zvakakura zveruzivo rwakatsanangurwa munhoroondo yeUS.
Julian Assange Anopomerwa Zvekubatsira Wekare Anonzwisisika Muongorori kubva kuUnited States, Chelsea Manning, uyo akamupa mukana wekuwana zviuru zvemagwaro nekutaurirana nezvehondo muIraq neAfghanistan, pamwe neruzivo rwekudyidzana nezvevaya vakasungwa kuGuantanamo Bay.
Sekureva kwaBen Brandon, mumiriri weUnited States panguva dzehurukuro, Julian Assange akakwanisa kurodha pasi:
"90,000 yehondo inotaura nezveAfghanistan, mazana mana ezviuru kubva muhondo yeIraq, kuongororwa mazana masere evasungwa vanobva kuGuantanamo Bay, pakati pemamwe mashoko akapatsanurwa"
Kutongwa kweChina kwekudzoserwa kwakatevera kuonekera mudare Chitatu, mune iyo Southwark court akatongerwa Assange kugara mujeri kwemwedzi gumi neimwe yekutyora mutemo wechibatiso chako.
Nguva yekuvharirwa kubva muna Kubvumbi 11 ichafungidzirwa uye Assange anogona kukumbira kusunungurwa kwake kwechinguva mushure mekunge apfuudza hafu yemutongo wake. Kuverenga kwese kwakaitwa, unofanirwa kugara masvondo makumi maviri nemaviri chete, kana angangoita mwedzi mitanhatu.
Ben Brandon, gweta rehurumende yeUnited States, akaudza dare neChina "Kuti Assange angatarisana kusvika kumakore mashanu mutirongo kana matare eUS akamuwana aine mhosva"
Kuverengerwa kwemutongo uyu kwaizove kwakanangana neuchapupu kubva mukutaurirana pakati paAssange naChelsea Manning.
Neiko Kumwe kumwe kunzwikwa kwakarongwa muna Chivabvu 30 uye Chikumi 12, mushure mekunge magweta aAssange awana zvese zvirimo muchikumbiro chekuendeswa kwake kuUS.
Pfungwa dzevanyanzvi vezvemitemo pamamiriro anofanirwa kuzadzikiswa
Sekureva kwaAnna Bradshaw, nyanzvi mumutemo weEuropean tsotsi:
Kuendeswa kwaAssange kuUnited States kunoenderana nekubudirira kwakateedzana kwemiyedzo inoitwa nevakuru veBritain.
«Izvo zviri nyore. Mhosva yauri kupomerwa yekuita inofanira kunge ine tsamba pasi pemutemo weBritain, ”akadaro.
Zvisinei, Camp Assange ingangodaro inoshandisa akati wandei levers, kunyanya iyo yekodzero dzevanhu.
Chokwadi, kutya kunoramba kuripo nezve kurapwa Assange angatambura kana akaendeswa kuUnited States. Mepu iyi inokwidza ruoko rwemusasa weAsange inoenderana nenyaya yekuti UK iri kusaina kugungano reEuropean nezvekodzero dzevanhu.
Daniela Nadj, Purofesa weMutemo paQueen Mary University yeLondon, anopfupisa:
“Kune zvipingaidzo zvakakomba zviri pamutemo kuchikumbiro chekudzoserwa kuUnited States. Nyanzvi zhinji dzinobvumirana neizvi: chikamu chemwedzi yakawanda (ona makore) yehondo dzemutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Julian Assange anopinda muhondo yekurwisa kuendeswa kuUnited States
Firefox extensions haichakwanise kushandiswa nekuda kwesitifiketi iyo isingachashandi